Hlola iSapporo, Japan - World Tourism Portal
Hlola iSapporo, Japan
Yini ukubona. Izindawo ezihamba phambili ezihamba phambili eSapporo, Japan.
Amawebhusayithi okuvakasha asemthethweni weSapporo
Bukela ividiyo nge-Sapporo
Hlola iSapporo inhloko-dolobha nedolobha elikhulu kunayo yonke yesiqhingi esisenyakatho yeHokkaido, Japan.
Elinye lamadolobha amasha eJapan, isibalo sakwaSapporo sikhule sisuka kweziyisikhombisa e1857 saya cishe ku-2 wezigidi namuhla. Ukuba idolobha elisha, ikakhulukazi ngezindinganiso zaseJapan, kusho ukuthi kuncane ngendlela yezakhiwo zendabuko kanye nokwfana nemizi efana Kyoto. Kepha okushodayo ku- “Japan-ness” kukwenza nama-boulevards amahle avulekile, agcwele izihlahla ukuwajabulela ehlobo naseqhweni elihle kakhulu nasezakhiweni ebusika obude.
ISapporo inesimo sezulu esishisayo esivela ezwenikazi kanye nokushisa okuhlukahlukene phakathi kwehlobo nobusika. Ubusika buyabanda, buthonywe yi-Sibisian Anticyclone, nge-average jotobeing -3.6 ° C. ISapporo ithola iqhwa eliningi ngesikhathi sasebusika, inikezwa imimoya eqandayo evela eSiberia, eqoqa umswakama ovela eLwandle lwaseJapan. Eqinisweni, kungumuzi wesibili obukhulu kunabo bonke eqhweni ngobukhulu bawo emhlabeni, lapho isilinganiso seqhwa sonyaka wonke siba yi-597cm.
Ihlobo lifudumele futhi linomswakama, ngokushisa okuphakathi kwe-22.3 ° C. I-East Asia Monsoon imvamisa ifika ekuqaleni kuka-Agasti, yehle ngokulingana emazingeni aphansi emvula, bese iphetha ekuqaleni kuka-Okthoba. Inarguingly isizini engcono ukuvakashela leli dolobha, kanye neHokkaido, ngokuvamile yintwasahlobo noma ukwindla. Ukuqhakaza kwama-cherry kuvame ukwenzeka ngasekupheleni kuka-Ephreli kuya maphakathi no-Meyi.
Ukufika eSapporo ngesitimela kudla isikhathi futhi kuyabiza. Ukuthenga i-JR pass kungokomnotho, uma uqhamuka Tokyo noma kuphi eningizimu. Ngaphakathi kweHokkaido, izitimela zixhuma iSapporo emadolobheni amakhulu amakhulu, kufaka phakathi iHakodate, i-Otaru ne-Asahikawa.
Okwalabo abahlala eJapan abane ukuthula (souvenir) isibopho sokugcwalisa ihhovisi lakho laseJapan lapho ubuya eholidini lakho laseHokkaido, okungcono kakhulu ukuthula ukuthenga kwaSapporo yikubuquitous Shiroi Koibito ("Abathandi Abamhlophe"). I-chocolate slice emiswe emigqonyeni emibili yamabhisikidi amnandi, ngasonka ngakolunye uhlangothi futhi atholakala ebhokisini lamanani ahlukahlukene - okumnandi ngokwanele, kepha kunalokho okuxakile, futhi bambalwa abantu baseNtshonalanga ababehlobanisa ukunambitheka neJapan. Iyatholakala kuzo zonke izitolo eziyisikhumbuzo edolobheni, kanye nezitolo eziningi ezikhumbuza kakhulu esiqhingi.
Ukuba luhlobo lokuwina lwengxenye enhle yonyaka, iSapporo futhi inezitolo eziningi ezithengisa zonke izinhlobo zezimpahla zeqhwa. Ekuqaleni nasekupheleni kwesizini ngayinye, amadili amaningi amahle kugiya lonyaka owedlule angatholakala, kwesinye isikhathi ngezaphulelo ezifika ku-60% off, ngesinye isikhathi ngaphezulu! Futhi, kunezitolo ezimbalwa zemidlalo yokuvuselela kabusha idolobha kanye namadolobha angaphansi komhlaba lapho amadili amahle engasasetshenziswa kakhulu, ngenxa yokuthokoza kwamaJapane ngokuba namagiya amasha njalo ngesizini. Buza Imininingwane yabavakashi ukukusiza ukuthola ukuvuselelwa kwemidlalo kanye nesitolo seqhwa
Isiphuzo sokuzikhethela lapho useSapporo kusobala I-Sapporo Beer, futhi inketho enhle yalokhu iMnyuziyamu weBeer. USusukino, eningizimu yalesi sikhungo, ingesinye sezifunda zaseJapan ezinkulu kakhulu zokuphila ebusuku (nezibomvu-ukukhanya), ezenzelwe ukudala izisebenzi eHokkaido. Inedumela elithile elingajwayelekile ngenxa yokubandakanyeka okusindayo kwe-yakuza ebhizinisini, kodwa ngokuvamile iphephile kubahambi abangafuni ngentshiseko inkathazo. Fika lapho kulayini ongaphansi komhlaba iNamboku, esiteshini saseSusukino.